धोका दिनेलाई के भनम् र खै ! « Jana Aastha News Online
धोका दिनेलाई के भनम् र खै !
प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७४, शुक्रबार ०६:४५
२२ गते शुक्रबार, अर्थात्, चोलेन्द्र समशेरको एकल इजलाशले संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी पारेपछि उसै दिन सुशीला कार्कीले बालुवाटारबाटै कमाण्ड सम्हालिन् । तर, काम गर्नचाहिा आइतबार, अर्थात् वैशाखको २४ गते गइन् । त्यसदिन दिउासो अढाइ बजेसम्म सर्वोच्चका बेञ्चहरु बसेनन् । बिहानै कजलिष्ट आयो, अर्थात् न्यायाधीशका बेञ्च तोकिए, तर न्यायाधीशहरू इजलासमा पुगेनन् ।
आˆनो च्याम्बरमा सुशीलाले सबै न्यायाधीशलाई बोलाइन् र भनिन्, 'अब एक ढिक्का भएर जानुपर्छ । क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।' अर्थात्, उनले आˆना कमी-कमजोरी पनि स्वीकारिन्, सबैलाई समेटेर लैजान नसकेकोमा । उता, त्यसैदिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुई-दुईपटक बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसाग कुराकानीमा व्यस्त रहे । दोस्रोपटक राति साढे नौ बजेसम्म प्रचण्डसाग थिए । प्रधानमन्त्रीसाग भने, 'चोलेन्द्रको फैसला बिनाहिच्किचाहट स्वीकार्नुस् ।' महाभियोग प्रकरणमा दलका अडान आ-आˆना भए पनि संसदको सार्वभौमिकता उल्लंघन गर्ने फैसला स्वीकार्न सबैलाई मुस्किल छ ।
सुशीला स्वतः निलम्बनमा गएपछिका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली चोलेन्द्रबाट धोका भयो भन्दै छन् । गोपालले साह्रै भर परेर त्यससम्बन्धी मुद्दाको पेशी चोलेन्द्रकहाा तोकेका थिए । तर, पूर्वसहमतिमाथि ठूलो घात भैदियो । उनीहरुबीचको सहमति रहेछ, अहिलेलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने ।
त्यसबेलासम्म सुशीलाको जागिर पनि सकिन्छ । तर, चोलेन्द्रले अचम्मै गरिदिए, सुशीलालाई तुरुन्त हाजिर हुन आउनुसम्म भनिदिएर । यो रिसमा गोपाल आइतबार सर्वोच्च गएनन् । सुशीलाले बोलाएको छलफलमा पनि सामेल भएनन् । भनिन्छ, सुशीलाले त्यसदिन एउटा बेञ्च तोकेकी थिइन्, आफू र गोपालको । कामु प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई सामान्य न्यायाधीशसरह बेञ्च तोकेको सांकेतिक विरोध पनि होला त्यो ।
महाभियोग प्रकरणपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच सल्लाह भएको छ, सबै घटनालाई संयमतापूर्वक र सुक्ष्म ढंगले हेर्ने । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको एकीकृत भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसआधारमा आˆनो भूमिका तय गर्ने । त्यसका लागि एकताबद्ध भएर जाने । चोलेन्द्र लगातार तीन वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने पात्र हुन् । अहिल्यै यस्तो आदेश गरिदिएपछि आˆना पालामा सितिमिति महाअभियोग नलाग्ने भयो । हुन पनि व्यवस्थापिका संसदमा कुनै पार्टीसाग एक चौथाई सदस्य छन् भने त्यो पार्टीका नेता, सांसदका मुद्दा कसरी हेर्ने ? कि आत्मसमर्पण गरेर जिताउनुपर्‍यो, नत्रत हराएपछि महाअभियोग लगाइदिने भए ।
भ्रष्टाचारजस्ता ठूला मुद्दाका पेशी हटाउने र वर्षौंसम्म फैसला नहुने चुरो कुरो त यो पो रहेछ ! न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाको रबर स्ट्याम्प हुने होइन भन्ने कुरा पनि त्यहाा उठ्यो । सुशीलाले भनिन्, 'मलाई अलिक पहिलादेखि नै धम्कीको भाषा आउन थालेको थियो ।' समस्या सल्टाउने पवित्र चाहना नै हो भने नवराजको मुद्दा हेर्दै आएका पााच न्यायाधीशबाहेककाले हेर्दा पनि त हुन्छ नि !
यसबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च फर्किएलगत्तै राजीनामा दिने या बिदामा बस्ने कुरा आए । नेपालका अनलाइन न्युज पोर्टलहरुले पनि त्यसलाई फलोअप गरे । यसलाई न्यायालयले गम्भीर रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । जेठ ४ गतेसम्म संसद बैठक स्थगित गर्नु भनेको सरकार पनि एक कदम पछि हटेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
– हरि गजुरेलबाट
रवि लामिछानेको नयाँ पार्टीविरुध्द आज पाँचौ उजुरी
राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रीहरु शून्य
जीतपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि भ्रष्टाचारमा डामिए
निर्णय अलि अपरिपक्व भए पनि भोलि नयाँ मन्त्रीको शपथ हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
सटिजन्स बैंकको ९५ओैँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा
गणतन्त्र दिवसमा आकाशमा बन्यो इटलीको झण्डा (भिडियो)